Masangano anomirira vashandi vehurumende gumi nemashanu asangana muHarare neChishanu pamusangano wechimbichimbi akasunga kuti vashandi vaenderere mberi nehurongwa hwekuramwa mabasa neMuvhuro unouya, kunyange hazvo paita kushanduka zvishoma kubva pane zvavakanga vambowirirana pakutanga.
Nhengo yeApex Council uye vari munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, VaRaymond Majongwe, vanoti masangano ose awirirana kuti vashandi vanoenda kumabasa kwavo neMuvhuro asi vasingashandi, vachimirira kunzwa zvichabuda mumusangano uchaitwawo neMuvhuro wakare pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi.
Vashandi vehurumende vakanga vambozivisa kuti vachaungana muHarare mangwanani eMuvhuro vasati vapinda mumigwagwa vachiratidzira, asi hurongwa uhwu hunonzi hwazosendekwa mushure mekunge masangano eTajamuka neNational Vendors Union Zimbabwe azivisa kuti aizopindirawo mukuratidzira uku.
Izvi zvinonzi hazvina kutambirwa zvakanaka nemamwe masangano evashandi vehurumende, ayo anonzi akanga oti ave kubuda muhurongwa hwekuratidzira uhwu.
Vashandi vehurumende vari kuda kuramwa mabasa vachinyunyuta nekunonoka kwehurumende kuvapa mabhonasi avo egore rapera.
Zvichakadaro, musangano waitwa neChishanu pakati pevamiriri vehurumende nevamiriri vavanachiremba navanamukoti unonzi vapatsanura vashandi, mushure mekunge vanachiremba varamba kutambira zvauya nehurumende kumusangano uyu, ukuwo vanamukoti vachigamuchira nemaoko maviri.
Vane ruzivo nezvemusangano uyu vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga yati yowedzera vanachiremba nemadhora makumi manomwe nemashanu pamwedzi pamari dze on-call alloawance pamusoro pemadhora mazana maviri nemakumi masere ane madhora masere, asi vanachiremba vanonzi varamba mari.
Hurumende inonzi yawedzerawo vanamukoti mari nemadhora gumi nemashanu pamwedzi, iyo inonzi yabva yangotambirwa nevamiriri venhengo idzi, izvo zvave kureva kuti vanamukoti vave kudzokera kumabasa vanachiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi revamiriri vesangano reZimbabwe Nurses Association,.
Vanachiremba vari kuda kuti mari dzekubatsirika idzi dzisvike pamadhora mazana manomwe nemakumi maviri pamwedzi.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvehutano, VaDavid Parirenyatwa.